शरीरले कसरी थेग्छ सात राउण्ड गोली ! « Ok Janata Newsportal
शरीरले कसरी थेग्छ सात राउण्ड गोली !
काठमाडौं । प्रहरीको गोली लागेर गम्भीर घाइते भइ उपचाररत अश्वेत अमेरिकी ज्याकोब ब्लेकले अस्पतालकै बेडबाट भिडियो सन्देश जारी गरी आफूलाई लगातार पीडा भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
विस्कनसिनको केनोशामा गएको अगस्ट २३ मा श्वेत प्रहरीले निहत्था ब्लेकमाथि सातपटक गोली प्रहार गरेका थिए । कारमा पस्न लागेका बेला तीन सन्तानकै सामुन्ने ब्लेकको ढाडमा सातपटक गोली लागेको हो । उनी हाल स्थानीय अस्पतालमा उपचाररत छन् र उनी पुनः हिँड्न सक्नेमा शंका रहेको डाक्टरले बताएका छन् ।
अस्पतालको बेडबाट भिडियो सन्देश जारी गरेका ब्लेकले असह्य पीडाका बाबजुद जीवन अझै धेरै बाँकी रहेको भन्दै आशाका साथ सो सन्देश अन्त्य गरेका छन् । २९ वर्षका ब्लेकमाथि भएको गोली प्रहारको घटनापछि अमेरिकामा प्रहरी बर्बरता तथा रंगभेद विरोधी प्रदर्शन पुनः भएको थियो । केनोशामा भएका केही प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप समेत लिएका थिए ।
ब्लेकमाथि भएको गोलीकाण्डको अनुसन्धान जारी छ । ब्लेकको परिवारका वकिलले ट्वीटरमा पोस्ट गरेको भिडियोमा बेडमा रहेका ब्लेकले पीडाका बारेमा बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘चौबिसै घण्टा दुखाई बाहेक केही छैन । सास फेर्दा दुख्छ, सुत्दा दुख्छ, कोल्टे फर्किँदा दुख्छ, खाँदा दुख्छ, दुखाई बाहेक केही छैन ।’
उनले अघि भनेका छन्, ‘तपाईँको जीवन, तपाईको जीवन मात्रै होइन, खुट्टा जो जीवन अघि बढाउनका लागि चाहिन्छ, यसरी नै खोसिन सक्छ । एकीकृत बन्नु होला, अर्थ जुटाउनु होला, हाम्रा मानिसहरुका लागि सबथोक सजिलो बनाउनु होला, किनकी धेरै समय खेर गइसक्यो ।’